Soo dejisan TED 2.4.0 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: TED
TED – software ah waxaa ku jira tiro audio iyo video laga duubay noocyo kala duwan ah. TED ka mid ah qaab ciyaareedka dadka caanka ah, Sweden farsamo, dhakhaatiirta, halyeeyada music, ganacsato guul iwm software wuxuu kuu ogol yahay in ay baadhaan xogta ay tags iyo playlists. TED ku jira tarjumaadaha diiwaanka afaf kale oo ay taageertaa subtitles ah. Software ayaa sidoo kale qaybiyaa qalabka audio iyo video ee qaybaha kala duwan. TED ku jira nidaam Bookmarks oo awood u leh inay ku darto qaab si ay ugu cadcad ama iyaga uploaded in qalabka.
Set A of audio iyo video laga duubay oo xiiso leh
System of Bookmarks
Soo dejisan TED
Faallo ku saabsan TED
TED Xirfadaha la xiriira
Mamba – maareeye ku habboon oo isgaadhsiinta iyo xidhiidhka. Codsigu wuxuu awood u siinayaa inuu daawado faylalka isticmaalaha, tafatirka macluumaadka shakhsiga ah iyo inuu bixiyo hadiyado macno leh.
Root Checker – waa fududahay in la isticmaalo softiweer si loo hubiyo xuquuqda superuser ee qalabka.